Uyivumela njani i-Pizza yakho ... Imveliso ukuba ithengise ngokwakho kwi-Intanethi | Martech Zone
Uyenza Njani iPizza Yakho… er… Imveliso iyazithengisa kwi-Intanethi
NgoMvulo, Februwari 16, 2015 Lwesine, Okthobha 29, 2020 Douglas Karr
Umhlobo wam olungileyo, uJames, ungumnini weBrozinni Pizzeria. Andizukuphambanisa- kuyinyani Eyona pizza yohlobo lweNew York eIndy. UJames usincedile kancinci, ezisa ukumangalisa kwakhe Ilori ye-Indianapolis pizza kuqokelelo mali kunyaka ophelileyo kunye nokutya umcimbi ozayo kule veki sinayo. Ukubuya, saqala ukuyila indawo yakhe.
Xa sasizimisele ukuyila isiza, sasisazi ukuba inye kuphela into ebalulekileyo - ukuvumela ukutya kube kuyathetha. Ipitsa kukutya okufanelekileyo kweefoto- ngemibala emangalisayo onokuthi uyijoje ngokujonga nje. Kutheni le nto ungayifihla imifanekiso kwizakhelo ezincinci kwisiza esigcwele ukuhamba, iibar ezisecaleni, kunye nenye indawo echithiweyo? Ukusebenza noJames kunye neqela lakhe, sagqiba kwelokuba sihlaziye kwaye silungise i Umxholo omangalisayo werestyu ifikeleleke kakhulu.
Besinokwakha umxholo wesiko- kodwa inyani ayifanelekanga kwaphela. Abaqulunqi bemixholo benza nje umsebenzi omangalisayo wokwakha imixholo eguquguqukayo ethengiswa ngamawaka kodwa enokuthi yenziwe ngokwezifiso njengoko senzile kwisiza seBrozinni. Umxholo uza nazo zonke izibonelelo:
Iifayile ze-Photoshop Kwimeko apho unqwenela ukwenza ngokusesikweni imifanekiso esetyenzisiweyo.
Ubeko lweparallax Kuyonwabisa ukuhamba kunye nokubonelela ngenqanaba eliphezulu lobugcisa.
Uyilo oluphendulayo ujongeka umhle kwiselfowuni okanye kwithebhulethi njengoko besenza kwidesktop.
ezimfutshane ezivumela amaqhosha, ukwahlula ngokuthe tyaba, ii icon kunye nokubekwa kwikholamu.
Umxholo womntwana eyakhelwe ngaphakathi ukuze kungafuneki ukuba udlule kwaye wenze ngokwezifiso umxholo osisiseko-ohlala uhlaziywa ngenkxaso okanye ukukhutshwa kwezokhuseleko.
Idomain yabanjwa kwiSisombululo seNethiwekhi ke saye sagqiba kwelokuba sihambe ngokusingathwa kweWordPress apho… impazamo enkulu. Siphelelwe ngumda wendlela ngokuhlaziya iifayile zomxholo! Xa ndicela uncedo kwiqela labo lenkxaso, bafuna ukundithengisa ngenkxaso yezobuchwephesha kwaye bandibuyisele iiyure zokusebenza. Ugh.
Ndiyilumile imbumbulu kwaye ndibeka indawo kwisicwangciso esipheleleyo sokubamba, ucinezele yonke imifanekiso usebenzisa uKraken, emva koko walungiswa WP Rocket ukunceda ukukhawulezisa isiza. Siza kubona ukuba isebenza njani kwezi veki zimbalwa zizayo ngaphambi kokuba sithathe isigqibo sokuba kuyafuneka na ukuba siye kumbuki zindwendwe ongcono.
Okukwintsusa: Kwakungekho nzima kakhulu okanye kungabizi mali ukwakha indawo eyahlukileyo enomxholo omkhulu kunye nokusingathwa okuphakathi. Siza kuhlala sijongile ngoku ukuba isiza siqhuba njani ngokukhangela, kwezentlalo kunye nakwi-odolo zokwenza!
tags: umzukulwanauyilokuyilo webwebhsayithi
Uyilo lwentlalo: Ikhalenda yakho yeendaba zeNtlalo kunye neQonga lokuShicilela
Iingcebiso ezi-4 ezibalulekileyo zokusebenzisa iiMpahla zakho zeMifanekiso
Juni 22, 2015 ngo-10: 22 PM
UDouglas -Iwebhusayithi yeendawo zokutyela ibonakala imangalisa, nangona kunjalo ngokusekwe kwinqaku lenqaku bendinethemba lokukwazi ukuya kwimenyu kwaye ndibone ukuba isitya sokutya ngasinye sijongeka njani kwiifoto! Endaweni yoko ibiyi "menyu yeqonga elinye" ndingathanda ukuncokola nawe malunga nendlela iCrave.ly enceda ngayo ukutshintsha oku kwaye incede iindawo zokutyela zilawule iimenyu zazo kwi-intanethi ngeefoto ukubonisa ukutya njengoko ubutshilo, vumela ukutya kuthethe. !
Juni 22, 2015 ngo-10: 42 PM
Molo Bryan, intle kakhulu loo nto! Asibancedi ngokubonakalayo kodwa ungafikelela kwaye ubone ukuba bayayithanda na. Sisanda kuphumeza inkqubo abayicelileyo.